Akụkọ - Ozi Ọma Si Ụlọ ọrụ Nnụcha mmanụ !
Ozi Ọma Si Ụlọ ọrụ Nnụcha mmanụ !
Ọgwụgwụ nke Septemba 2021, Binuo Mechanics rụkọrọ ọrụ na Shengli Oilfield nke bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta pụrụ iche nitrogen generator maka ubi mmanụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị guzobere mmekọrịta nkwado nkwado ogologo oge, na Binuo Mechanics ga-enye ọrụ ahaziri ahazi nke ọgbọ nitrogen na compressor ikuku n'ime afọ ise na-abịa.
A na-agbanye akụrụngwa skid nke gụnyere sistemu ikuku abịakọrọ, sistemu ikuku ikuku, ọgbọ PSA nitrogen, sistemu nkwalite na igbe akpa. Ihe mmepụta nitrogen bụ 400Nm3 / h na ịdị ọcha bụ 99%. A ga-ewepụta ya na Nọvemba.
Nke a bụ nnukwu ọganihu nke Binuo Mechanics na ụlọ ọrụ nchacha mmanụ. Maka ọdịnihu, anyị ga-etinyekwu uche na nkwado ndị ahịa na mpaghara dị iche iche, na-esi ọnwụ na-enye ngwaahịa dị mma na ọrụ ndị ọzọ maka ndị ahịa.
Oge nzipu: Sep-29-2021
Atlas Copco Ngp, Psa Nitrogen, Hydrogen na Oxygen Generator, Holtec Nitrogen Generator, Ọgbọ ike hydrogen, Psa Nitrogen osisi,